.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Mp3 သီချင်းများ ဒေါင်းရန် ၁
1 မောင့်ချစ်သူ သားသား Click Here 2.70 MB
2 မြန်မာမလေး ပြည့်စုံ Click Here 1.90 MB
3 မငြိုငြင်ရက်ဘူး မိစန္ဒီ Click Here 1.80 MB
4 အဝေးရောက်ချစ်သူ ဆိုတေး Click Here 2.23 MB
5 အပြစ်မမြင် ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း Click Here 1.00 MB
6 မိုးလုံးမှိုင်း ဘိုဖြူ Click Here 1.90 MB
7 ကောင်မလေး ရိန်မိုး Click Here 2.10 MB
8 သူငယ်ချင်း အချစ် ဆိုတေး Click Here 2.10 MB
9 နင်ပြန်လာမယ့်အချိန် Bunny Phyo၊ လွှမ်းပိုင်၊ နန္ဒာထွန်းအောင် Click Here 1.90 MB
10 ဥမ္မာလီဇာ Bunny Phyo Click Here 1.60 MB
11 တောင်းပန်တယ် အောင်လ Click Here 2.20 MB
12 ဗုံကြီးသံ Unknown Click Here 2.70 MB
13 ချစ်ခွင့်ရချင်ပြီ ကောင်းမြတ် Click Here 1.70 MB
14 အချစ်ကို သိချိန် မီးမီးခဲ Click Here 1.80 MB
15 လက်ခုပ်နှစ်ဖက် သြရသ ၊ စန္ဒီ Click Here 1.70 MB
16 မျက်စိမှိတ် နားပိတ်ယုံ သြရသ ၊ အဉ္စလီ (သဲသဲ) Click Here 1.50 MB
17 တစ်ခါတည်း ချစ်ချင်လို့ပါ ချမ်းချမ်း Click Here 1.90 MB
18 ရင်မှာ အရင်အတိုင်း အစ္စဏီ Click Here 2.20 MB
19 ဒွိဟ Bobby Soxer Click Here 1.60 MB
20 အမြဲတမ်း ယုံကြည်တယ် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ၊ သီရိဆွေ Click Here 2.20 MB
21 အမှတ်တရနေ့ ဆိုတေး Click Here 1.10 MB
22 ကိုယ်မညာတော့ဘူး N ကိုင်ရာ Click Here 1.50 MB
23 နာရီတွေ ရပ်ထားမယ် ကောင်းကောင်း Click Here 1.50 MB
24 နှစ်ယောက် တစ်အိပ်မက် အေသင်ချိုဆွေ Click Here 1.80 MB
25 နင်ဟာငါ့ရဲ့ ရဲလေး Click Here 2.20 MB
26 သနပ်ခါးချစ်သူ R ဇာနည် Click Here 1.60 MB
27 ရင်ခုန်သံ စကားလေးတစ်ခွန်း ရဲလေး ၊ L ဆိုင်းဇီ Click Here 2.00 MB
28 နေရာ၂ R ဇာနည် Click Here 2.00 MB
29 မင်းအတွက်ဆိုရင် ဇော်ပိုင် Click Here 2.00 MB
30 တစ်ကိုယ်တော် Valentine စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ Bunny Phyo Click Here 1.94 MB
31 လိုက်ဖက်တဲ့ဘဝ R ဇာနည်၊ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း Click Here 2.00 MB
32 အဖြူရောင်သတို့သမီး လွှမ်းပိုင်၊ Bobby Soxer Click Here 1.14 MB
33 နင်မရှိရင် Bunny Phyo Click Here 1.82 MB
34 ရင်ခုန်သံမပြောင်းလဲကြေး Bobby Soxer ၊ Soe Phyo Click Here 1.70 MB
35 အိပ်မက် သင်္ကြန် လွှမ်းပိုင် ၊ Bobby Soxer Click Here 1.90 MB
36 မင်းသဘော Bobby Soxer Click Here 1.40 MB
37 ဆည်းလည်းသံ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း Click Here 2.20 MB
38 လက်လက်ကိုထလို့ Bobby Soxer Click Here 1.30 MB
39 အချစ်ရိပ်ညနေ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း Click Here 1.90 MB
40 စာ အေသင်ချိုဆွေ Click Here 3.30 MB
41 လွမ်းလွန်းလို့ ရဲရင့်အောင် Click Here 2.80 MB
42 ၁၀၀ တန် လွှမ်းပိုင် Click Here 2.20 MB
43 ဘာဖြစ်ဖြစ် ချစ်မယ် ဟဲလေး Click Here 1.50 MB
44 အိမ်ပြန်ချိန် ရဲလေး ၊ ဇမ်းနူး Click Here 2.20 MB
45 အခုလောလောဆယ် Wanted Click Here 2.10 MB
46 လက်ခံပေးပါ မျိုးကြီး Click Here 2.20 MB
47 ပျော်ပါစေ စန္ဒီမြင့်လွင် Click Here 1.80 MB
48 တယ်လီဖုန်း Bunny Phyo Click Here 2.40 MB
49 အဝေးက မိစန္ဒီ Click Here 1.70 MB
50 ပန်းမခူးရ ရိန်မိုး Click Here 2.00 MB
51 ကိုယ့်ရဲ့သက်တန့်ငယ် မိစန္ဒီ Click Here 1.70 MB
52 မွေးနေ့ Bunny Phyo Ft KiKi Click Here 1.90 MB
53 ငါ့ဘဝ ငါ့အိမ်ဂျယ် ခင်စုစုလှိုင် Click Here 2.80 MB
54 ရယ်တာပေါ့ Bobby Soxer Click Here 1.40 MB
55 Happy Birthday Unknown Click Here 1.80 MB
56 မ ပူစူး Click Here 1.90 MB
57 မနေတတ်သောအလွမ်း အိမ့်ချစ် Click Here 1.70 MB
58 နင်သာရှိရင် Nine One - Feat ဂေဂေး Click Here 1.80 MB
59 တစ်နေ့တော့ အဲလက်စ် Click Here 1.00 MB
60 သမီးရှင် ဗျူဟာ Click Here 1.80 MB
61 တစ်ကယ်ဆို အချစ်ပဲလိုတယ် ချမ်းချမ်း Click Here 1.60 MB
62 အချစ်ရိပ်ညနေ ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း Click Here 1.90 MB
63 အနားနားဘေးမှာ လွှမ်းပိုင် ၊ Feat- ဇေရဲ Click Here 1.90 MB
64 သူငယ်ချင်းများစွာ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် Click Here 2.20 MB
65 ချစ်တယ်ဟုတ် Bunny Phyo Click Here 1.30 MB
66 ချစ်သူ့အနား Bunny Phyo Click Here 2.00 MB
67 ချစ်နေတုန်းပဲ စန္ဒီမြင့်လွင် Click Here 1.80 MB
68 စွာတေးလန် Bobby Soxer Click Here 2.60 MB
69 အလွမ်းရောင် ဇော်ပိုင် Click Here 1.70 MB
70 ထာဝရအဆုံးထိ ဝိုင်ဝိုင်း Click Here 3.50 MB
71 တုနှိုင်းမဲ့ ရတနာ ထူးအိမ်သင် Click Here 1.90 MB
72 တိမ်ဖုံးတဲ့လ လေးဖြူ Click Here 2.10 MB
73 ကောင်းကင်က အချစ်ငှက် ရိန်မိုး Click Here 2.50 MB
74 အပြန် ထူးအယ်လင်း Click Here 3.00 MB
75 အလွမ်းသင့်ပန်းချီ ရတနာမိုင် Click Here 1.80 MB
76 ကိုယ်ရံတော် ရွှေရည်ဖြိုးမောင် Click Here 1.70 MB
77 အဖေ လေးဖြူ Click Here 2.70 MB
78 ရန်မဖြစ်တော့ဘူး Bunny Phyo၊စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ဗုံဗုံ Click Here 2.10 MB
79 အဖွင့်အမှာစကား Bunny Phyo Click Here 1.90 MB
80 ဆွေးမြေ့အသည်း Cobra Click Here 1.50 MB
81 နင်စေရင် ပူစူး Click Here 2.70 MB
82 လမင်းသို့ Unknown Click Here 1.80 MB
83 မင်းစိတ်တိုင်းကျ ပူစူး Click Here 2.70 MB
84 စည်း ဝိုင်ဝိုင်း Click Here 2.20 MB
85 လေပြေ အေသင်ချိုဆွေ Click Here 1.60 MB
86 တစ်ယောက်တည်းသာ နေမျိုး Click Here 1.50 MB
87 ပက်သက်ခွင့်ပြုပါ ဟဲလေး ၊ အစ္စဏီ Click Here 1.80 MB
88 ပြန်မဆုံဖြစ်ခဲ့ရင် V နိုထွန်း Click Here 2.00 MB
89 နှစ်ပတ်လည် Bunny Phyo Click Here 2.00 MB
90 အပြာရောင်ည မျိုးကြီး Click Here 1.70 MB
91 ဘာအကြောင်းကြောင့် မျိုးကြီး Click Here 2.40 MB
92 အချစ်ဦးပုံပြင် ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း Click Here 1.90 MB
93 ဆက်ရန်မရှိ မျိုးကြီး Click Here 3.00 MB
94 ခွင့်ပြုတယ် ခွင့်လွှတ်တယ် R ဇာနည် Click Here 1.50 MB
95 ရတုအဆက်ဆက် ဆူဇီ Click Here 1.90 MB
96 ကိုယ့်ရဲ့ကွက်လပ် ရဲလေး Click Here 2.10 MB
97 ရေခဲရိုက်အပြုံး မိစန္ဒီ Click Here 2.50 MB
98 အိမ် ဓိရာမိုရ် Click Here 2.00 MB
99 အလွမ်းဝင်္ကပါ အစ္စဏီ Click Here 1.50 MB
100 နင်ရယ်ငါရယ် သူငယ်ချင်3းCreator Click Here 1.70 MB
101 နင်လိမ်လည်း ငါချစ်တယ် ဆိုတေး Click Here 1.80 MB
102 ပက်သက်ခွင့်ပြုပါ Bunny Phyo Click Here 2.10 MB
103 အဖြူရောင်လေးပါ ချစ်သုဝေ Click Here 2.90 MB
104 ထို့ကြောင့်ဝေးရသည် အိမ့်ချစ် Click Here 1.00 MB
105 အတ္တသမား ကျွန်တော် OXYGEN Click Here 2.40 MB
106 သူဌေးကြိုက် ဟဲလေး Click Here 1.90 MB
107 ရန်သူ နီနီခင်ဇော် Click Here 1.60 MB
108 သားကြီး ဘိုဖြူ Click Here 2.30 MB
109 ပြည့်စုံပါစေ ဘိုဖြူ Click Here 2.00 MB
110 ငါ့နေရာ ရဲရင့်အောင် ၊ ဇေရဲ Click Here 2.40 MB
111 Stay With Me Bunny Phyo Click Here 2.00 MB
112 အဝေးရောက်သွားခိုက်မှာ Bunny Phyo Click Here 1.70 MB
113 သနပ်ခါး Black Hole Click Here 1.70 MB
114 မင်းလေးသိဖို့ D ဖြိုး Click Here 2.40 MB
115 အလှဆုံးနေ့ ဂျီလတ် Click Here 2.00 MB
116 အရာရာ ခြားနားလည်း ဂျီလတ် Click Here 1.80 MB
117 ဝေးပြီးတဲ့နောက် ဂျီလတ် Click Here 1.50 MB
118 ဒဏ္ဍာရီအနမ်း ရိန်မိုး Click Here 2.20 MB
119 အချစ်ခွန်အား ရိန်မိုး Click Here 1.60 MB
120 မြန်မာမလေး MC ရဲနောင် Click Here 1.80 MB
121 အကြင်နာအကြည့်တွေအကြောင်း ဇော်ပိုင် Click Here 1.70 MB
122 ချစ်တဲ့တောင်ပေါ်သူ ရိန်မိုး Click Here 1.70 MB
123 တမ်းတခဲ့  Unknown Click Here 1.50 MB
124 တမ်းတခဲ့  MT Click Here 1.50 MB
125 နှလုံးသား အရင်းအနှီး အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့် Click Here 1.50 MB
126 ဇူလိုင် မနော Click Here 2.50 MB
127 ဝါဆိုမိုးနဲ့ပြန်ခဲ့ပါ ဗညားဟန် Click Here 2.20 MB
128 အနှိုင်းမဲ့ ဇော်ဝင်းထွဋ် Click Here 2.30 MB
129 ကံကောင်းလို့ R ဇာနည် ၊ မေခလာ Click Here 1.50 MB
130 ရပါတယ်ထွက်သွားပါ ရဲရင့်အောင် Click Here 2.00 MB
131 သူမက ဂျယ်လီ ၊ ကျွန်တော်က ကော်ဖီ YanYan, Baygyi, Little T Click Here 2.20 MB
132 အရင်လိုပဲ အရင်အတိုင်းပဲ ရေဗက္ကာဝင်း Click Here 2.30 MB
133 လွမ်းရယ်မပြေ ဆောင်းဦးလှိုင် ၊ စည်သူလွင် ၊ အဲလက်စ် Click Here 1.80 MB
134 ငါ့လိုချစ်မယ့်သူ သီရိဆွေ Click Here 1.80 MB
135 Solar Coaster သီရိဆွေ Click Here 2.50 MB
136 ပထမခြေလှမ်း တင်ဇာမော် ၊ ဖြူဖြူကျော်သိန်း Click Here 2.50 MB
137 Love (Kg Ma Lay) ရဲရင့်အောင် Click Here 1.00 MB
138 စကိုင်းလမ်း ဇော်ပိုင် Click Here 1.90 MB
139 ပျော်တာပေါ့ အမေရယ် စည်သူလွင် Click Here 1.70 MB
140 တောင်ပြာတန်းကသိတယ် စိုင်းဆိုင်မောဝ် Click Here 2.60 MB
141 မတွေ့ကြရင်အကောင်းသား စိုင်းဆိုင်မောဝ် Click Here 3.50 MB
142 ရှမ်းပဲပုတ်လေးကျွန်တော် စိုင်းဆိုင်မောဝ် Click Here 2.10 MB
143 မောင်ပေးတဲ့အချစ်ပြန်ဆပ်ခဲ့ပါ စိုင်းဆိုင်မောဝ် Click Here 3.00 MB
144 သုည လင်းလင်း Click Here 1.90 MB
145 အပိုဆု ဆောင်းဦးလှိုင် Click Here 2.00 MB
146 အချစ်မရှိနေ့ရက်များ တင်ဇာမော် Click Here 1.90 MB
147 ဝါရင့်သမ္ဘာရင့် ဟဲလေး Click Here 1.70 MB
148 အနှိုင်းမဲ့ထိပ်ထား မြင့်မြတ် Click Here 3.20 MB
149 Baby Fly With You ဇေရဲ ၊ မိစန္ဒီ Click Here 1.80 MB
150 တစ်ဦးတည်းသော လွှမ်းပိုင် Click Here 2.40 MB
အကြောင်းတစ်ခုကြောင့် ဒီစာမျက်နှာမှာ သီချင်း အပုဒ်ပေါင်း ၁၅၀ သာ ထားရှိတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် သီချင်းအသစ်တွေကို Mp3 သီချင်းများ ဒေါင်းရန် ၂ တွင် ဆက်လက်တင်ပေးသွားပါမည်။
Posted by Thurainlin at 10:59